अध्याय २ – लङ्गडो मानिसको चङ्गाइ – Word of Truth, Nepal
अध्याय २ – लङ्गडो मानिसको चङ्गाइ
पन्जाहरूले यसो भन्नु मूर्खता हुने थियो, “हेर हामी कति महान् छौं! हामीले भर्खरै एउटा सफल शल्यक्रिया सम्पन्न गर्यौं र त्यस मानिसको ज्यान बचायौं!” वास्तवमा यदि बोल्न सक्ने भएक‍ा भए तिनीहरूले यसरी भन्नेथिए, “हामी एक जोडी पन्जा मात्र हौं, अरू केही होइनौं, तर हाम्रा एकजना महान् डाक्टर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई काममा लगाईकन ठूला-ठूला कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले नै सबै गर्नुहुन्छ, तर आफ्‍नो शल्यक्रियाको काम गर्न उहाँले हामीलाई प्रयोग गर्नुभएकोमा हामी धन्यवादी छौं!” आफूहरू केही पनि होइनौं भनी पत्रुस र यूहन्ना जान्दथे तर उनीहरूको एकजना महान् परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जसले उनीहरूलाई महान् तरिकाले प्रयोग गर्दैहुनुहुन्थ्यो!
उनीहरू रोकेर अडिए (प्रेरित ३:४)! पत्रुसले त्यस मानिसतिर डिठ लगाएर हेर्दै भने, “हामीतिर हेर!”
पत्रुसले लङ्गडो मानिसलाई के भने (प्रेरित ३:६)? “उ___ र हिँ___।” उसले आफ्‍नो जीवनमै कहिल्यै नगरेको काम गर्न पत्रुसले उसलाई भन्दै थियो!
परमेश्वरले एक आश्चर्यकर्म गर्नुभयो र यो मानिसको निम्ति जुन कुरा असम्भव थियो त्यसलाई सम्भव तुल्याउनुभयो र मानिसहरूले अ____ र त____ माने” (प्रेरित ३:१०)।
छक्कै परेका सयौं मानिसहरू यो व्यक्ति कसरी निको पारियो भनेर जान्नलाई भेला भए। त्यस अचम्मको चङ्गाइलाई पत्रुसले कसरी वर्णन गरे? के उनले घमण्ड गर्दै यसको सम्पूर्ण श्रेय आफैं लिए? के उनले यसो भने, “म तिमीहरूले यो जानेको चाहन्छु कि माछा माछा मार्ने पत्रुस एक महान् चङ्गाइकर्ता हुन्! मैले मेरो आफ्‍नै शक्तिले गरेको यो अचम्मको कार्य तिमीहरूले देखेको म चाहन्छु”? के पत्रुसले यस्तै भनेका थिए(प्रेरित ३:१२)?________। पत्रुस जान्दथे कि उनी डाक्टर होइनन् तर पन्जा मात्र हुन्। यो आश्चर्यकर्म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा गरिएको थियो (प्रेरित ३:१६)।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 09:04:392020-11-27 14:22:41अध्याय २ – लङ्गडो मानिसको चङ्गाइ
अध्याय १ – मण्डलीको जन्मदि�...अध्याय ३ – भित्र र बाहिरबाट...